Taariikh Kooban: Nagruuma 1944-2021 - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home Dhacdooyin Cusub Taariikh Kooban: Nagruuma 1944-2021
Taariikh Kooban: Nagruuma 1944-2021
Shicibyahow wanaagsani walalayaalow
wadankiisa u shaqeeyaa walaalayaalow
wadajir bey laba gamcood wax ku qaban
karaane, aan is weheshano walaalayaal
aan wada jirno walaalayaal
Faadumo Cali Jaamac (Nakruuma) waxay dhalatay qiyaastii 1944-kii, magaalada Dhusamareeb. Waxay sannadkii 1963dii ku biirtay xoogga dalka Soomaliyeed, iyadoo kalkaaliso ah.
Fanka waxay soo gashay sannadkii 1964dii. Waxay ka mid ahayd, Faadumo-Nagruuma, laba iyo tobankii gabdhood ee lagu asaasay Kooxda Waabari. Riwaayaddii ugu horraysay ay Faaduumo dhigtay waxay ahayd, “Maanta iyo Fadhi aa!”.
Riwaayadda waxaa lahaa abwaankii weynaa, Rabbi haw naxariistee, Cismaan Aadan Askari. Nagruuma riwaayaddaas waxay ka qaadday laba heesood. Midi waa heesta caanka ah ee “Shicibyahow Wanaagsani”. Heestu waxay noqotay, hees caan ah, hees bulsheed, hees ay Faadumo caan ku noqotay. Heesta waxaa laxameeyay Cabdulqaadir Muuse.
Faadumo Nagruuma waxay qaadday heesta “Dhulka Meesha Doogge leh” ee uu lahaa Maxamuud Cabdullaahi Ciise “Sangub”. Waxay kaga tartantay dabbaaldeggii Nayjeeriya, 1977dii. Waxay wada tartameen Miriam Makeba.
Riwaayadihii ugu caansanaa ee Faadumo Nagruuma lagu xasuusto, waxaa ka mid ah:
• Maanta iyo Fadhi aa!, Wed Iyo Wacad. Ama waa lay Dooran ama Daadku i Qaad. Waxaa allifay abwaanka weyn, Alle haw naxariistee, Cismaan Aadan Askari.
• Gashaanqaad Illaah Ma Xilo. Riwaayadda waxaa ellifay, abwaan Cali Diiriye “Cali Gaab”.
• Ciidanka Illaahay ha Ciseeyo. Waxaa wada allifay Meecaad Miigane iyo Dafe.
• Dan Layguma Naco. Waxaa allifay abwaan Cismaan Daroog.
• Aabbahay ka Samree Adiga Awgaa. Waxaa allifay Maxamed Cali Kaariye.
• Hablayahow Hadmaad Guursan Doontaan. Waxaa allifay, abwaan Maxmuud Cismaan Dukaale.
• Wiil iyo Waalid kala war la’. Waxaa allifay abwaan Axmedey Gaashan.
• Qabyo. Waxaa allifay, Maxamuud Cabdullaahi Ciise “Sangub”.
Macallinkeeda Masri ahaa, korneel ahaa baa arkay in ay aad u xafidi ogtahay, darsiguu siiyo. Wuxuu ku yiri: “haddaad jaamacad ka bixi lahayd, sida Kiwaama Nagruuma ayaad shahaadooyin badan qaadan lahayd. Halkaas bay naanaysta Nagruuma ka raacday.
Faadumo Cali Jaamac “Nagruuma” waxay 21/2/2021, ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Eebbe haw naxariisto, xabaasha haw nuuriyo.